Sidekick: ပိုမိုကောင်းမွန်သောအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတွက် Web Browser | Linux မှ
ကွန်ပျူတာကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိသောငါတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသိထားပြီးဖြစ်သည် web browser ကို အလွယ်တကူထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ် အသုံးအများဆုံး application ကို နီးပါးမဆိုအကြောင်းကို operating system အရေးကြီးတယ် ပြီးတော့ဒီthisကန်အမှန်, ရုံးသုံးအစုံ အ ဖိုင်ဘရောင်ဇာများ (ဖိုင်များ) နှင့် လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application များ.
ထို့အပြင်၎င်းသည်အသစ်ဖြစ်စေ၊ အသစ်ထွက်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေတိကျတဲ့ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာအကြောင်းမကြာခဏကျွန်ုပ်တို့တင်လေ့ရှိသည်။ နှင့်ဤပစ္စုပ္ပန်ထုတ်ဝေထဲမှာအလှည့်ဖြစ်ပါတယ် နင်တစ် ဦး အတွက်မြန်ဆန်။ အကျိုးရှိစွာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကတိပေးသောစိတ်ဝင်စားဖွယ် web browser တစ်ခု ပိုကောင်းသောအွန်လိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းအလုပ်အတွေ့အကြုံကို။
ဒီကိစ္စကိုမ ၀ င်ခင်၊ ဒီအသစ်ကလွဲပြီးဒီအချက်ကိုသတိရပါ Sidekick ဝဘ်ဘရောက်ဇာအခြားပလက်ဖောင်းအချို့ရှိသည်သို့မဟုတ်မရှိသည်၊ ဖြစ်နိုင်သည် Desktop (GUI) သို့မဟုတ် Terminal များ (CLI)နှင့်သူတို့ကွဲပြားခြားနားရှိသည် အားသာချက်များဆိုးကျိုးများ ကွဲပြားခြားနားသောအဘို့အအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်၌တည်၏ အသုံးပြုသူ / လိုအပ်ချက်အမျိုးအစားများကဲ့သို့သော:
ဤအရာများသည်လူသိအများဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သဖြင့်အသစ်များထပ်မံပေါ်ထွက်လာမည်မှာသေချာသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်aကန်အမှန်ရှိသည် ယခင် post အောက်ပါကဲ့သို့ရှာဖွေရန်နှင့်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Waterfox - အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းပြီးလွတ်လပ်သောဝဘ်ဘရောက်ဇာ
1 Sidekick - အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်အာရုံစိုက်သော web browser တစ်ခု
1.1 Sidekick Web Browser ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
1.2 Sidekick ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း
Sidekick - အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်အာရုံစိုက်သော web browser တစ်ခု
Sidekick Web Browser ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
"Sidekick သည်ခရိုမီယမ်ဘရောက်ဇာကို အခြေခံ၍ အလုပ်လုပ်သောလည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်သောအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏အဖွဲ့နှင့်သင်အသုံးပြုသောဝဘ်ဆိုက်အားလုံးကို interface တစ်ခုတည်းတွင်အတူတကွပေါင်းစည်းသည်။"
ထိုအဘို့, ကတိ browser tabs များသို့မဟုတ် windows များအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်း မကြာခဏပုံမှန်အသုံးပြုသူ၏ကျန်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အထူးသဖြင့်ဘရောင်ဇာတစ်ခုအတွင်း၌ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်မကြာခဏမပေါင်းသင်းနိုင်သော desktop application များ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Sidekick သည်ထူးခြားချက်များကြောင့်ထင်ရှားသည် အောက်ပါ:
Trackers ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြေ - သူတို့မှာကြော်ငြာကိုအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးပုံစံမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ကြော်ငြာတွေနဲ့ tracker တွေကိုအပေးအယူမရှိပိတ်ဆို့ထားတယ်။
AI-based ပဲ့ရပ်ဆိုင်းမှုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလိုအပ်တာတွေကို memory ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားလို့တစ်ချိန်ချိန်မှာအသုံးပြုသူမလိုအပ်တဲ့ tabs များကိုအလိုအလျောက်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။
tabs များပိုမိုကောင်းမွန်မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေ - အလားတူ tabs တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှတ်ဉာဏ်သိပ်နည်းတယ်။
သင့်ရဲ့ကနေ, က download လုပ်ပြီး တရားဝင် download အပိုင်းနှင့် format ".deb"ငါ၏အအထူးသဖြင့်အမှုအဘို့, ကတည်းကငါသုံးပါ MX Linux ကို 19, ငါကဖိုင်တွဲကနေ install လုပ်ဖို့ပဲ "ဒေါင်းလုပ်" အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြု။
ပြီးတော့သင်အဲဒါကိုဖွင့်နိုင်တယ်၊ setup ခြေလှမ်းများ installation လုပ်ငန်းစဉ်တခုလုံးကိုအပြီးသတ်ဖို့ \_ t
အတိုချုပ်အားဖြင့်တွေ့နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပေါ်အခြေခံကာ ခရိုမီယမ်, နှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါပိုကောင်းမြန်ဆန်အတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့ဖန်တီးခဲ့တယ် web browser ကို။ ကျွန်ုပ်၏အထူးသဖြင့်ကိစ္စရပ်တွင်၊ တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခြင်းအစား၊ မေးလ်တွင်လက်ခံရရှိသည့်ကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ configuration ကိုဖြည့်ပါ။ ငါထင်သည်အတိုင်း၊ သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်စားသုံးမှုကျိုးကြောင်းဆီလျော် (ကျွန်ုပ်၏ RAM ၏ ၂.၉% သည် Firefox ၏ ၅.၂% နှင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလက်တွေ့ကျသည်) ထည့်သွင်းထားသောအော်ပရာပုံစံ webappsဒါကဘယ်ဘက် sidebar မှာပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ခေါ်ဝဘ်ဘရောက်ဇာအကြောင်းကို «Sidekick» ပိုမိုကောင်းမွန်သောအွန်လိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသောအလုပ်အတွေ့အကြုံအတွက်မြန်ဆန်ထိရောက်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုကတိပေးသည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Sidekick - ပိုမိုကောင်းမွန်သောအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတွက် Web browser
ငါ SIdekick စာမျက်နှာထဲသို့ ဝင်၍ ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်မတူပါ၊ open source ပင်မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးခြင်းသည်ကောင်းသော်လည်း၊ အသေးစိတ်ကိုဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြသင့်သည်၊ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။
မင်္ဂလာပါ, Bertie ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ "အခမဲ့ဆော့ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်" ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုငါမသိခဲ့ဘူး၊ ငါက Sidekick ဟာလုံးဝဒါမှမဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာဂူဂဲလ်ရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ Chromium ကိုအခြေခံထားလို့ပဲ။ ခရုမ်း။
Diego (အခြား) ဟုသူကပြောသည်
၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်မကောင်းသောအစပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ Blink သို့“ အိမ်ခေါ်ခြင်း” တွင်ထည့်သွင်းပါက၊ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ရာများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအနည်းဆုံးအသုံးပြုသူထံမှဂူဂဲလ်ကိုပြောပြရန်ဂူဂဲလ်ကိုပြောပြပါကကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
အသုံးမပြုတဲ့ tabs များ၏ RAM ကို download လုပ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် Auto Tab Discard ဟုခေါ်သောရိုးရှင်းသော add-on တစ်ခုဖြင့်ရရှိသည်။
Diego မှစာပြန်ရန် (အခြား)
Diego မှနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံများမှအလွန်ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသည်များစွာသော browser များကြိုးစားပြီးနောက် Firefox ကိုသုံးပါ။
RISC-V ပရိုဆက်ဆာသစ်သည် watt per performance စံချိန်တင်ခဲ့သည်